मुख्यमन्त्री शाक्यले प्रदेश प्रमुख समक्ष बुझाइन् राजीनामा, नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया शुरु « Naya Page
मुख्यमन्त्री शाक्यले प्रदेश प्रमुख समक्ष बुझाइन् राजीनामा, नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया शुरु
‘प्रदेश बनाउन मिलेर काम गरौं’
प्रकाशित मिति : १० कार्तिक २०७८, बुधबार १५:२२
हेटौंडा, १० कात्तिक । बागमती प्रदेशकी मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यले प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्मा समक्ष राजीनामा बुझाएकी छन् ।
प्रदेशसभा बैठकबाट सोझै प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा पुगेर उनले राजीनामा बुझाएकी हुन् । मुख्यमन्त्री शाक्यले बुधबार प्रदेशसभा बैठकमा राजीनामाको घोषणा गरेकी थिइन् । सत्तारुढ दल नेकपा एमाले विभाजन भएपछि मुख्यमन्त्री शाक्य नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको थियो ।
सत्तारुढ दल वा सत्ता साझेदार दल विभाजन भएपछि संविधानतः ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यता अनुरुप मुख्यमन्त्री शाक्यले विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्ताव प्रदेशसभामा पेस गरेकी थिइन् । सो प्रस्तावमाथि छलफल भइ मुख्यमन्त्री शाक्यले छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा राजीनामा घोषणा गरेकी हुन् ।
योसँगै बागमती प्रदेशमा अब नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया शुरु भएको छ । प्रदेश सरकारको नेतृत्वका लागि विपक्षी गठबन्धनबीच यसअघि नै नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका संसदीय दलका नेता राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेलाई जिम्मेवारी दिने सहमति भइसकेको छ ।
मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यले राजीनामा दिएकी छन् । उनले बुधबार प्रदेशसभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै संविधानको धारा १६९ को उपधारा १ (क) अनुसार अर्को सरकार गठनका लागि मार्ग प्रशस्त गरेको बताइन् ।
शाक्यले प्रदेशको विकासका लागि सबै राजनीतिक दल मिलेर अघि बढ्न आवश्यक रहेको पनि बताइन् । मुख्यमन्त्री शाक्यले प्रदेशसभामा द्वन्द्व कम गर्न आफू मतविभाजनमा जान नचाहेको बताइन् ।
‘हामी संस्कारयुक्त बनौं, द्वनन्द्व कम गरौं । प्रदेश बनाउन मिलेरै काम गरौैं’ उनले भनिन्, ‘आफ्नो पदीय दायित्व होला । तर आखिरमा प्रदेश बनाउन हामी नमिली सुखै छैन ।’ मुख्यमन्त्री शाक्यले आगामी दिनमा मिलेर अघि बढ्न अहिले राजीनामा दिने बाटो नै आफूलाई ठीक लागेको बताइन् ।
सबै पक्ष मिलेमा प्रदेशलाई नमुना बनाउन सकिने भन्दै मुख्यमन्त्री शाक्यले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको परम्परागत भावना त्याग्नुपर्ने बताइन् ।
‘हिजाको परम्परागत सोचले हुँदैन । प्रतिपक्ष भएपछि विरोध गर्नैपर्ने, सत्तापक्षले जस्तो भए पनि पास गरेर जानुपर्ने, यो सोच त्याग्नुपर्छ । राम्रोलाई राम्रो भन्ने नराम्रोलाई आलोचना गर्ने । यो संस्कार हामीले विकास गर्न किन सक्दैनौं ?’ उनले प्रश्न गरिन् ।
थापा–लिङदेनले टुङ्गो लगाए पदाधिकारीमा उम्मेद्वार, कसको प्यानलबाट को–को (सूची)
माओवादीका सदस्य आठ लाख नाघे, अब छिट्टै १० लाख पुग्दैछन् : प्रचण्ड
कांग्रेस अधिवेशन : ६२ जिल्लामा नयाँ नेतृत्व, कहाँ कुन पक्ष बलियो ?
एमाले पदाधिकारी : पाँच जना निर्विरोध, चुनाव लडेका १४ जनाले कति-कति ल्याए भोट ?
काठमाडौं, १९ मंसिर । नेपाली काँग्रेस बागमती प्रदेश सभापतिमा इन्द्र बानियाँ निर्वाचित भएका छन् ।
पराजयपछि कमल थापाले तयार गरे आफूलाई हराउने ‘ज्ञानेन्द्र टिम’ का मान्छेको सूची
काठमाडौं, १९ मंसिर । पार्टी अध्यक्षमा युवा नेता राजेन्द्र लिङ्देनसँग पराजय भोगेपछि कमल थापा पक्षको
कांग्रेस महाधिवेशन : सभापति चयन गर्न बागमतीमा पुनः मतदान शुरु, इन्द्रलाई भीमसेनको साथ
हेटौंडा, १९ मंसिर । नेपाली कांग्रेसको बागमती प्रदेश अधिवेशनमा सभापति चयनका लागि पुनः मतदान शुरु
२०७८ मंसिर १९ गते आइतबारको तपाईको राशिफल
२०७८ मंसिर १८ गते शनिबारको तपाईको राशिफल